जनताको आवाज बोक्न नसक्ने हो भने के को जनप्रतिनिधि - Aarsha Khabar
जनताको आवाज बोक्न नसक्ने हो भने के को जनप्रतिनिधि
by Aarsha Khabar २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार
कीर्तिपुर नगरपालिकाले वातावरण सम्बन्धी नीति कस्तो बनाएको छ ?
कीर्तिपुर एउटा ऐतिहासिक सहर हो । हामी सबैको परिकल्पना भनेको हाम्रो वातावरण स्वच्छ, हराभरा र स्वस्थ होस् । कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रुपले रमणीय रहेकोले यहाँको वातावरण पनि स्वच्छ, हराभरा र स्वस्थ रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ ।
वातावरण प्रदुषणले विश्वमा मानव बस्ति नै संकटमा परेको अवस्था छ । वातावरण प्रदुषण विभिन्न कारणले हुन्छ । त्यसमध्ये इँट्टाभट्टा पनि एक हो । इँट्टाभट्टाका कारण अहिले खेती योग्य जमीन प्रायतः नष्ट हुँदै गएको छ । हाम्रा बालबालिकाहरुले भोलिका दिनमा धान र गहुँ हेर्नु पर्यो भने म्यूजिएममा खोज्नु पर्ने होकि भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यो विकराल समस्या देखेपछि हामीले नगरपालिका भित्र बहस चलायौं । दिनप्रतिदिन माटो झिक्ने क्रम बढेर गयो । इँट्टा बनाउन माटो झिक्दै जाँदा बस्तिहरु पनि जोखिममा पर्ने अवस्थामा आइपुग्यो । कीर्तिपुर नगरपालिकाले यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था भएन । त्यसपछि हामीले अभियन्ता रामकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायौं, अच्युत जी सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसँग हाम्रो पटक पटक छलफल र बसाई पश्चात झण्डै दुई देखि साढे दुई वर्षसम्म इँट्टाभट्टाको विरोध भन्दा पनि धुँवा र धुलोको विरुद्धमा हामी लाग्यौ । प्रदुषणयुक्त कलकारखानालाई हामीले समयमै नियन्त्रणमा लिन सकेनौ भने साँच्चिकै बस्न लायकको सहर हुँदैन भन्ने बहस भइसकेपछि वडा नम्बर ४ को तर्फबाट हामीले नगरपालिकामा प्रस्ताव लिएर गयौं ।
इँट्टाभट्टाका कारण अहिले खेती योग्य जमीन प्रायतः नष्ट हुँदै गएको छ । हाम्रा बालबालिकाहरुले भोलिका दिनमा धान र गहुँ हेर्नु पर्यो भने म्यूजिएममा खोज्नु पर्ने होकि भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा इँट्टाभट्टा नै छैन । नहुँदा नहुँदै पनि साँध, सधियार क्षेत्रको सम्पूर्ण माटोहरु प्रयोग भइरहेको छ । कार्यपालिका बैठकबाट हामीले माटो इँट्टाभट्टाको लागि झिक्न नदिने भन्ने निर्णय गर्यौ । प्रक्रियामा जाँदै गर्दा चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पनि दुई पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । इँट्टाभट्टा संचालकहरुलाई पटक पटक प्रहरी कार्यालयमा बोलायौं तर उहाँहरु आउनु भएन । कुनै पनि प्लास्टिकजन्य बस्तुहरु र वातावरणमा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरु अघि बढाउन नदिने कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्यो । हामीले इँट्टाभट्टाको सन्दर्भमा सवाल अगाडि बढ्यौ । संजोगबस चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पनि मुकुन्द घिमिरे ज्यूको नेतृत्वमा वातावरण जोगाउने, इँट्टाभट्टा हटाउने आन्दोलन अगाडि बढिरहेको रहेछ । मलाई एक हिसाबमा दुःख पनि लाग्यो, उहाँ क्यान्सर पीडित पनि हुनुहुदो रहेछ । युवाको जस्तो जोशका साथ सशक्त भएर लाग्नु भएको छ । हामी त वास्तवमा निरिह नै हौ । उहाँहरुले उठाएको कदममा काँधमा काँध किन नगर्ने, जित र हारको कुरा होइन, हाम्रो अभियान त इँट्टाभट्टा साउजीलाई पनि बचाउने अभियान हो । जसले इँट्टाभट्टा संचालन गरिरहनु भएको छ उहाँको पनि त स्वच्छ हावा लिएर दुई चार वर्ष थप आयु बढोस् भन्ने कामनाका साथ अगाडि बढेका हौं ।
तपाई इँट्टाभट्टा पीडित मूल संघर्ष समितिको सल्लाहकारमा रहेर आन्दोलन अघि बढाइरहनु भएको छ । दशौं वर्षदेखि संचालमा रहेको इँट्टाभट्टा सहजै बन्द होला जस्तो लाग्छ ?
इँट्टाभट्टा जसले संचालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरुसँग हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन । तर, उहाँहरुलाई हाम्रो आग्रह के हो भने सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । उहाँहरुको दिनप्रतिदिन केही रुपैयाँ कमाइ त होला, उहाँहरुको कमाइले गर्दा सम्पूर्ण व्यक्ति क्यान्सर पीडित भएर, विभिन्न रोगहरुले ग्रसित भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन । मौलिक हकको अधिकार पनि हो । उहाँहरुलाई एउटा आग्रह के छ भने सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो समस्या समाधान होस् । उहाँहरुले अन्य स्थानमा पनि काम गरिरहनु भएको छ यहाँ नै इँट्टाभट्टा किन चलाउनु पर्यो ? उहाँहरुलाई यातायातको दृष्टिकोणले या हरेक किसिमले सहज होला ? त्यसकारणले यहाँबाट हट्न नखोजेको होकि भन्ने लाग्छ । उहाँहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ । जनताको भावनालाई बुझेर तुरुन्त सच्चिनु हुन्छ भन्ने लाग्छ । होइन उहाँहरु अटेर गर्नु हुन्छ भने यो देशमा धेरै क्रान्तिहरु भए, धेरै उपलब्धिहरु आए, जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । धुँवा धुलो खाएर सहेर जनता बसिरहन्छन् जस्तो लाग्दैन । हामी त जनप्रतिनिधि हौ । जनताको आवाजै बोक्न नसक्ने हो भने के को जनप्रतिनिधि हामी । जनप्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ नै छैन । होइन भने आफ्नै हिसाबमा, व्यापार व्यवसायमा लागे भइहाल्यो नि । जनता रातदिन मरिरहने, जिउन पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले ठिक तरिकाले सोच्न नसक्ने हो भने हामी जिताउनुको अर्थ के ? जनताको अघि कसैको केही लाग्दैन । जनताकै शक्तिबाट धेरै आन्दोलन भएको देखेका छौं ।
संघर्ष समितिले नगरप्रमुखलाई दिएको ५ दिनको अल्टिमेटम पनि सकिएको छ । अबका दिनमा आन्दोलन कस्तो किसिमले अघि बढ्छ ?
हामी आन्दोलन एकदम सभ्य तरिकाले बढाउछौं । अभद्र व्यवहार गरेर हामी अगाडि जाँदैनौ । किनकी हामी चेतनशील प्राणी हौं । अहिलेको जनता पनि चेतनशील भएको हुँदा आन्दोलन सभ्य तरिकाले नै अगाडि बढ्छ । हाम्रा आन्दोलनका चरणहरु हुन्छन् । जनप्रतिनिधि भएकोले जनताको सकारात्मक आवाजमा पहिले हामी होमिन तयार हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको नाताले म सिपाहीको भूमिका खेल्ने छु । अब आन्दोलनले एउटा दिशा लिन्छ । मैले जस अपजस पाउनु भन्दा पनि जनता बाँच्न पाउनु यो पहिलो कुरा हो ।
सबैभन्दा पहिला यहाँहरुलाई धन्यवाद, जनताको आवाज आर्ष नेपालले उठाएको छ । पत्रकारिताकै कुरा गर्दा खेरी स्वच्छ पत्रकारिताको पनि यहाँ खाँचो छ । जनताको आवाज हामीले भन्दा पनि यहाँहरुले बुलंद बनाइँ रहनु भएको छ । सम्पूर्ण जनतालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी धैर्यताका साथ आफ्नो आवाज अगाडि बढाऔं । हामी सबै एकजुट भएर स्वच्छ, स्वस्थ, हराभरा वातावरणका लागि आवाज उठाउनु पर्छ । कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नगरबासी र जनप्रतिनिधि सबैले यो अभियानलाई ऐक्यबद्धता जनाउनु हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
भारतको कदमविरुद्ध कूटनीति र राजनीतिकरुपमा प्रतिवाद गर्ने : प्रचण्ड
विज्ञापन एजेन्सीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन
चन्द्रागिरिको थानकोटमा मृत अवस्थामा महिला भेटिइन् (तस्विरसहित)
Aarsha Khabar March 31, 2020 March 31, 2020
चन्द्रागिरि ६ को अभियान, मेरो टोल मै सुरक्षित राख्छु, एक टोल एक स्वयमसेवक’
चौथो इन्द्रदह पर्यटन उत्सव हुँदै
Aarsha Khabar February 16, 2020 February 16, 2020